Otu esi etinye & hazie Git na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
October 21, 2021 October 21, 2021 by Jọshụa James
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Git na AlmaLinux 8 n'ụzọ dị iche iche.
Ekele, ị tinyela Git na Almalinux 8 site na iji usoro njikwa dnf.
Mgbe ị na-ede akwụkwọ ntuziaka, 3.3.1 bụ ntọhapụ kwụsiri ike kachasị ọhụrụ, mana nke a na-agbanwe mgbe niile, yabụ gbaa mbọ nweta ụdị kachasị ọhụrụ.
Na mpio ọnụ gị, jiri ya wget iwu dị ka n'okpuru:
Mara, nke a ga-ewe nkeji ole na ole, dabere na ike ịrụ ọrụ sistemụ gị.
Ekele, ị tinyela Git na Almalinux 8 site na iji usoro nchịkọta.
Ewezugaghị, Git na-echekwa nkọwa na ~ / .gitconfig faịlụ. Ị nwere ike nyochaa ihe echekwara ugbu a site na iji iwu cat:
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux, GIT Mail igodo